Folder Lock - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ပြန်စာ - dir lock 1.4(Folder Lock)
ကျနော် ဖိုဒါလော့ ကို သုံးတာအဆင်ပြေပါတယ်
ုဒါပေမဲ့ကျနော်စက်က NTFS Permission တွေကို ပေးဖို့ properties အောက်မှာsecurity tab မရှိတော့ဘူးဗျာ Folder Option ထဲမှလည်း simple sharing တို့ standard sharing တို့ ကို ရွေးဖို့ လည်း option က မပါဘူး(ကျနော်စက်က windows server2003 ပါ)
XP မှာလည်းစမ်းကြည့်တယ် ဖိုဒါလော့ကို အင်စတောမလုပ်ခင် ဆိုရင် security tab ရှိတယ် အင်စတော့လုပ်လိုက်ရင် security tab ကို သူ့ က ဖယ်ပြီး စိုးမိုးသွားတာထင်တယ်
တကယ်လို့ ကိုယ်က NTFS Permission ကို စိတ်ကြိုက်ပေးချင်လို့ ဖိုဒါလော့ကို ပြန်ပြီး အန်အင်စတော့လုပ်တော့လည်း ပြန်ပေါ်မလာတော့ဘူးဗျာ
security tab ကြိုပဖေါ်တဲ့နည်းလမ်းလေးများရှိရင် ကူညီပါအုံးဗျာ
windows server2003 ရဲ့ security tab ဘယ်လို ပြန်ဖေါ်လိုရမလဲ သိပါရစေခင်ဗျာ
ဖိုဒါလော့ကို အင်စတော့လုပ်လိုက်တဲ့ account တစ်ခုသာ security tab ပျောက်တာပါ
အဲဒီစက်ရဲ့ အခြား account တွေမှာတော့ ဘာ effect မှမဖြစ်ပါဘူး
ီdir lock.exe ကိုဖွင့်ပြီး File menu အောက်က option ထဲမှာ Enable Security tab ကိုကလစ်လိုက်တာ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီဗျာ
ကျွန်တော်လည်းကူညီပါအုံးဗျာ lock လိုက်တာပတ်စ၀ပ်မေ့သွားလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပါအုံး
Find More Posts by ဟိန်းသိန်းအေး
Originally Posted by ချစ်လား
Right Click >>> Lock လုပ်ပြီး Password ပေးလိုက်တိုင်း Unknown error ဆိုပြီး ပြနေပါတယ် ကယ်ကြပါဦးဗျို့ . . .
Unknown error ဆိုပြီး ပြနေတယ်.
Control Panel>>Add or Remove ထဲဝင်ကြည့်တော့
Microsoft .Netframework 2.0 Service Pack2,
Microsoft .Netframework 3.0 Service Pack2,
Microsoft .Netframework 3.5 Service Pack 1 ဆိုတာတွေ ရှိတယ်။
Find More Posts by JiaoZu
Originally Posted by ဟိန်းသိန်းအေး
အောက်ကလင့်မှာ ကျနော်ဆွေးနွေးထားပါတယ် .... http://www.myanmarfamily.org/forum/s...6&postcount=12
ပို့စ်9ခုအတွက် 11 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Decrypt လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ပေးခဲ့တဲ့ password character ၁၀ ခုကျော်ရင် Decrypt မလုပ်ပေးဘူးနော်။ ဟုတ်လား????? ကျွန်တော်တော့ စမ်းကြည့်တာမရဘူးနော်။ မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ dir lock ကိုသုံးပြိး password ပေးရင် character ၁၀ ခုမကျော်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒ ကိုရာမည အားရင်စမ်းကြည့်ပါအုံးဗျာ။ Reply လေးလည်းလုပ်ပါအုံး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်........
Find More Posts by ဇော်သီဟ7
ကျနော်လုပ်တာ ရသလိုပဲ ... ပြန်လုပ်ကြည့်ပါဦး ..
၁၀ ခုမကထည့်တာလဲ ရပါတယ် .... အဆင်မပြေ ပြန်ပြောပေါ့ဗျာ
Folder Lock_v6.0.5 [Upload တင်သည့်ရက်စွဲ - ၂၂.၁၂.၂၀၀၈]
ကိုသားကြီး, အကြော်ဆရာ, Blackbrother, chitthu, kkawave, kyawmin
folder lock ချတဲ့ အရာလေးပါ
မိမိအရေးကြီးတဲ့ folder တွေကို လုံခြုံအောင် lock ချရအောင် ဒီဆော့ဝဲယာလေးကိုအသုံးပြုပါ။
အရေးကြီးတဲ့ အရာတိုင်းကို lock ချထားလို့ရပါတယ်.....
ယူချင်လျှင် ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ....
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဦးသာကြီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
rfanquee, tu tu
ပြန်စာ - Folder Lock
ကျွန်တော်အခု သုံးနေတဲ့ Freehidefolder Software လေးက စိတ်ချလက်ချသုံးနေတာ ၂ နှစ်နီးပါးရှိနေပြီ
သုံးရလွယ်သလို www.cleanersoft.com ကနေအလွယ်တကူ download လုပ်လို့ရပါတယ်
ခွန်ညီး, ညီညီဇော်, ဖယောင်း
Folder Lock_ v 5.9.0 software မှာlock ပေးပြီး မှတ်ထားတဲ့ဖိုင်ကို program (E) မှာ သိမ်းထားမယ်ဆိုင်ရင် အကယ်၍ ကွန်ပျူတာ WINDOWS ကျသွားလို့ WINDOWS ပြန်တင်ပြီး
သွားတဲ့အခါ Folder Lock_ v 5.9.0 software မှာlock ပေးပြီး မှတ်ထားတဲ့ဖိုင်ကို ပြန်ရနိုင်မလား........ပြန်သုံးလို့ ရမလား....မှတ်ထားတဲ့ဖိုင် ပျက်သွားမလား...........ကျေးဇူးပြုပြီးရှင်းပြပေးစေ လိုပါတယ်...........
folder lock ဟာ run ပြီးတဲ့အချိန်မှာ အများအားဖြင့် My document ထည့်မှာရှိနေတတ်ပါတယ် ဒါကြောင့် windows ပြုတ်ကျသွားလို့ အသစ်ပြန်တတ်တဲ့အခါကြရင် အရင်က C: room ကို backup လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် backup ထဲကနေပြန်ယူလို့ရပါတယ် backup မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်တော့ မရတော့ပါဘူး ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ C: room ကို format ချရလို့ပါ ကိုယ့်လုပ်ထားတဲ့ file တွေဟာ C: room ထဲမှာရှိနေရင်ပြောတာနော် ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာဆို ပြန်ရနိုင်ပါတယ်
Last edited by tu tu; 13-07-2009 at 12:44 AM.. Reason: change font colour
ဟုတ်ပါတယ်။ Folder Lock ထားရင် ၀င်းဒိုးတင်ရင်သတိထားပါ။ ကျွန်တော်တော့မေ့ပြီးတင်မိလိုက်တာ အကုန်ပြောင်သွာတာပဲ ခင်ဗျာ။
ပြန်စာ - Folder Lock ပြဿနာ..........
Folder Lock 6.1.7.0 ကိုဘယ်ကနေ ဒေါင်းလိုက်မိလည်း မသိတော့ဘူး..............
မနေ့ က Folder Lock 6.1.7.0 ကိုဒေါင်းပြီးတော့ သုံးတာအဆင်ပြေပါတယ်....
အဲဒါနဲ့ ........... ကိုယ့်ရဲ့ စာရင်းတွေကိုထည့်ပြီး ပိတ်လိုက်တယ်........နှစ်ခေါက်သုံးခေါက် ကိုယ့်ပေးထားတဲ့
password ကိုပြန်နှိပ်ပြီး ဖွင့်ကြည့်သေးတယ်... ရပါတယ်..... အင်း....ဒီနေ့ တော့ password ကိုဖွင့်လို့ မရတော့ဘူး ဖြစ်နေတယ် . ပါဖြစ်လို့ လဲ.... သိတဲ့သူများဖြေပေးကြပါအုန်း..........
password လည်းမမှားပါဘူး... caps lock နဲ့ လည်းမဆိုင်ဘူး........ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိတယ်..
Folder Lock 6.1.7.0 ကိုဖွင့်ဖွင့်ချင် serial Number နဲ့Registration key တောင်းနေပါတယ်...
အဲဒီ key တွေ မဖြည့်ထားလို့ လားမသိဘူး.......
ုFolder Lock 6.1.7.0 key ကိုရှိရင်ပေးကြပါအုန်း ...
Folder Lock 6.1.2 with Reg key
ကျွန်တော် နှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးတင်ထားပေးပါတယ် Reg key ပါ ပါပါတယ် ..Folder [color="SeaGreen"]
အဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် . အခုကျွန်တော်ပေးတဲ့ version က 6.1.2 ပါ ... အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကသာ Download လုပ်ကြပါ ..
aungzaw, bonge, peacelover
ကို ညီနေမင်း ရေ....
ကီးကို ပြန်စစ်ပေးပါဦး....ထည့်တာမရဘူးဖြစ်နေတယ်..ပထမ ထည့်တုန်းက ရတယ် ....ဖိုင်လဲထည့်လိုက်ပြီတော့ မရတော့ဘူး...ကောင်းမလေးပုံတော့ပါသွားပြီနဲ့တူတယ်.. ကယ်ပါဦး
oasislove ရေ ပြန်စမ်းကြည့်ပါဦး ကျွန်တော် ဒါကိုပဲသုံးနေတာပါ .. ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး oasislove ရေ .. မလိုချင်တော့ရင်လဲ ပြန်ဖြေတာလွယ်ပါတယ် . သူ့ကို uninstall ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင် add and remove program ကနေ သွားပြီး ဖျက်လို့မရပါဘူး ... အောက်မှာပုံနဲ့ပြထားပါတယ် .
ဖိုင်တွေ ဘယ်လို ပြန်ယူမလဲ ???????
(၁) folder lock ကို ဖွင့်လိုက်ပါ ..
(၂) သော့ခတ်ထားခဲ့တဲ့ ဖိုင်ကို ရွေးပါ ..
(၃) ရိုက်ခဲ့တဲ့ password ကို ရိုက်ထည့်ပါ ..
(၅) ပြီးလျှင် Recover ကို ရွေးပါ ...
[color="red"](၄) ဖိုင်ထားမည့်နေရာကို ရွေးချယ်ပြီး ok ကိုနှိပ်ပါ ...
ကဲ ကို oasislove ရဲ့ ဖိုင်ကို ပြန်ရပြီမဟုတ်လား ...
ဒီပုံကတော့ uninstall လုပ်ဖို့ ပြထားတာပါ ...
Last edited by ညီနေမင်း; 20-07-2009 at 08:50 PM..
blackNwhite, bonge, phyomyintthein
ပြန်စာ - Folder Lock_ v 5.9.0
ကိုဂျစ်တူးတင်ပေးထားတဲ့ Lock Folder 3.6 က ရက် (၃၀)ပဲသုံးလို့ ရတယ်။
Registration Key ရနိုင်မလား။
Last edited by tu tu; 10-08-2009 at 03:28 PM.. Reason: edit quote
lfxp32p ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲက Lock Folder Xp 3.6 ဆိုတဲ့ patch ဖိုင်ကို copy ကူးပြီး C:\_Program Files\_Everstrike Software\_Lock Folder XP 3.6 ထဲမှာ paste လုပ်ပါ။
ပြီးရင် အဲဒီဖိုင်ကို double click ပြီး patch လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
အဲဒါဆို full version ရပါပြီ။
ကိုရင်ပြည့်စုံ, မောင်ပေါ်ဦး, Mandalarthar
ကျွန်တော်အဲဒီလိုလုပ်ပြီး ဖွင့်သုံးတယ်။ ပြီး ပြန်ပိတ်တော့ ဒီပုံပေါ်နေသေးတယ်။
ပြသနာ ရှိ၊ မရှိ သိချင်တာပါ။
ကျန်တာ အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်။
စမ်းကြည့်တာတော့ patch မလုပ်ခင် အဲလိုမျိုး တစ်ခါပဲ ပေါ်တယ်။
patch လုပ်ပြီးတော့ မပေါ်တော့ဘူး။
အပေါ် title bar ကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ patch မလုပ်ခင် evaluation mode ဆိုတာ ပေါ်နေမယ်။
Patch လုပ်ပြီးရင် အဲဒါပျောက်သွားမယ်။ အဲဒါဆိုရင် ရပါပြီ။
တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ . . .
lfxp32p ထဲမှာ Lock Folder Xp 3.6 ဆိုတာ မပါဘူး
AT4RE ဆိုတဲ့ Info ဖိုင် တစ်ခုတည်းပဲ ပါပါတယ်။
အဲဒါဆိုရင်တော့ Anti-Virus က crack file ကို virus လို့ယူဆပြီး delete လိုက်လို့ ဖြစ်မယ်။
Virus မဟုတ်ပါဘူး။ Anti-Virus ကို disable လုပ်ပြီးမှ rar ဖိုင်ကို ဖြည်ပါ။
Full Version ဖြစ်သွားပြီ
Find More Posts by ရဲကျော်
[quote=ဂျစ်တူး;11125]Lock Folder XP isanew security tool that lets you lock your files, folders, and drives with your personal password. Locking folders, files, and drives also effectively protects you from malicious programs, such as viruses, worms, and trojans.
ဒီ Lock Folder XP မှာ ကျွန်တော် Password မေ့သွားလို့ပါ။
အဲဒါ File တွေ Folder တွေတော့ မထည့်ရသေးဘူး။ (ရှိတာလည်း ကိစ္စမရှိတော့ဘူး ရဖို့က အရေးကြီးတယ်)
Uninstall လဲ လုပ်မရဘူး။ ဘယ်လို ပြန်ဖျက်ရမလဲမသိဘူး။ ပြောပေးကြပါဦးဗျာ ။။။။။။။။။။
အကယ်၍ ဆော့ဝဲလုံခြုံရေးအရ ရေးဖို့မကောင်းရင်လည်း PM လေးလောက်တော့ ပို့ပေးကြပါဗျာ ............... ။
Last edited by Mandalarthar; 27-05-2010 at 08:08 PM..
မန္တလာသားရေ Folder Lock လေးကိုသွင်းပြီးစမ်းတယ်.. စမ်းတဲ့အချိန်မှာ အထည့်မှာ ဘာ data မှ
မထည့်ဘဲ manual စမ်းကြည့်တယ်...အဲဒါနှင့် pwd မေ့တယ်.. ခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ ပြန်ပြီးတော့
ပထမဆုံးအနေနှင့် Unistaller OR Tuneup တခုခုနှင့်အရင်ဖြုတ်ပါ.. ဒီနှစ်ခုထဲကလဲ
fully activated ဖြစ်တဲ့အကောင်နှင့်ဘဲ ဖြုတ်ပါ.. မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကိုးလို့ကန့်လန့်
support မလုပ် error နှင့်တိုး ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါ..
regedit editor က Folder Lock ရှိတဲ့ Dir ထိရောက်အောင်သွားပီ Delete ပေးပစ်ပါ...
start>run>regedit>HLM>Software>Folder Lock ကိုရောက်ရင် right click ထောက်
regedit ကိုမကိုင်တွယ်ခင် back up လုပ်ထားပေးပါအုံးဗျာ..
hellboy, Mandalarthar, minthike
Folder lock ကို ဒေါင်းပြီး ...... ကီးလ် တွေထည့် လိုက်တာ အဆင်ပြေပါတယ်...ဒါပေမယ့်.. သုံးပြီး သိပ်မကြာဘူး... လိုင်စင် expired ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်....
အရေးကြီးတဲ့ personal လျို့ ဝှက်ချက်တွေ သိမ်းချင်လို့ ပါ.....
အဲဒါကြောင့်ေ၇ရှည် စိတ်ချလက်ချနဲ့ အလွယ်တကူသုံးလို့ ရတာလေးများရှိရင် ရှယ်ရ် ပါဦး ဗျို့ ... thks ...
ဆော့ဝဲမပါဘဲ Folder ကို လော့ချမယ် kothu ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ 84 09-08-2011 10:56 AM
bat နှစ်ဖိုင် နဲ့folder ကို ကလိမယ် .. linlinaung ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစမျာ3း01-01-2009 05:55 PM
Num Lock ဖွင့်နေရတဲ့ ပြဿနာ ကိုဖြိုးငြိမ်း ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ 10 10-08-2008 05:22 AM